I-Mo's Cozy Cabana ikwiveranda entle kunye nokufikelela kwidokhi
I-Cozy Cabana sisitudiyo esithandekayo nesithambileyo, esibekwe kwindawo ezolileyo kwaye yimizuzu nje yokuhamba umgama ukuya kwiSplit edumileyo. Ingaphakathi lisisiseko, nangona likhululekile. Ukuba ufuna ukubamba indlela yokuphila yaseBelize yokwenyani, le yindawo onokuba kuyo.
I-Cozy Cabana yiGold Standard eqinisekisiweyo.
Ubhukisho olwenziwe phambi komhla woku-1 kuSeptemba 2021, iA/C ayiqukwanga kwixabiso kodwa inokukhethwa njengemali eyongezelelweyo nge-US$5 ngobusuku. Kubhukisho olwenziwe emva kwalo mhla iA/C ibandakanyiwe.
I-cabana ibamba ubuninzi babantu aba-2 kwaye iyi-hangout egqibeleleyo kuyo yonke imisebenzi yesiqithi. Ngaphakathi kukho indawo yokuhlala encinci enekhitshi (isitovu/ioveni, ifriji, zonke izinto eziyimfuneko), igumbi lokulala elinesiqingatha esinebhedi enkulu kunye neshawari enkulu / igumbi lokuhlambela. Ngaphandle yiveranda ekhululekileyo ene-hammock. I-cabana ayinamanzi ashushu, kodwa kwimeko yemozulu yetropiki uya kukuvuyela ukuthatha ishawa ehlaziyayo.
Kufuphi nendlu-malunga neeyadi ezingama-50 ukusuka kwipropathi- lidokhi yethu, eyona ndawo ifanelekileyo yekofu yasekuseni, ukutshiswa lilanga okanye ukuntywila emanzini. Eli zibuko likwakunika isihlalo esingaphambili sezona ndawo zintle zokutshona kwelanga. Ukuba uyazithanda izinja, ukwindawo elungileyo: sinezinja ezi-2 ezinobubele kakhulu ezibizwa ngokuba yiGumbo & noMayzie ezithanda izilwanyana zasekhaya kwaye ezithanda ukudlala.
I-cabana imi ngasemva kwendawo yokutyela ekhethekileyo neyinyani (yangaphandle) 'Wish Willy Bar & Grill', eqhutywa ngumyeni wam. Indawo yokutyela ayikho ngaphezulu kweetafile kunye nezitulo ebaleni kwaye kufuneka uhambe ngayo ukuze ufikelele kwi-cabana yakho. Ukusuka kwiveranda ujonge ngaphandle kwendawo yokutyela. Kuvulwa rhoqo ebusuku kwisidlo sangokuhlwa.
4.80 ·Izimvo eziyi-350
4.80 · Izimvo eziyi-350
I-cabana lithuba nje lokuhamba ukuya 'kwi-Split', apho isiqithi sahlulwe kubini kwaye yeyona ndawo idumileyo yokuqubha, ukuntywila emanzini okanye ukusela isiselo kwindawo yentselo edumileyo 'iLivila Elivila'. Isitalato esikhulu -Front Street- silapha ekoneni. Apha uya kufumana iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile ezinkulu, iivenkile zezikhumbuzo kunye nokutya- kunye neendawo zeziqhamo. Abantu abaninzi basekuhlaleni odibana nabo basoloko befuna ukuncokola. Inxalenye yesiqithi apho ikhoyo i-cabana bububanzi beemitha ezili-100 kuphela ngoko ulwandle kunye nolwandle zihlala zikufutshane.
Umyeni wam (uMaurice) kunye nam sihlala kwindawo enye kwaye ngokuqhelekileyo omnye wethu uhlala enemibuzo okanye iingcebiso. Xa ufika omnye wethu uya kukunika intshayelelo emfutshane.